Dongguan Inkazimulo Star Laser Technology Co., LTD, nokubambisana Sino-isiJalimane, ukugxila laser ubuchwepheshe & izicelo, emva kweminyaka emisha ngokuqhubekayo nasentuthukweni, isibe owaziwa ezinkulu nomkhiqizi imishini laser.
Inkampani ungumnikazi ebhilidini, R & D Isakhiwo, machining esitolo, umdwebo bese Welding esitolo, ukuhlangana esitolo, Showroom yesimanje futhi ejwayelekile ifektri ezimbonini.
imikhiqizo main yenkampani kukhona metal laser cutting imishini, non-metal laser cutting imishini, laser wokugubha imishini, laser imishini Welding nokugotshiswa machines.The yonyaka ukukhiqizwa umthamo 8.000 amasethi imikhiqizo edayiswa emazweni angaphezu kuka-100 futhi izifunda.
Inkampani ikhonjwe njengoba kazwelonke zobuchwepheshe ibhizinisi, futhi ngokuphindaphindiwe iwine ubuchwepheshe Innovation Award. Njengoba umholi imishini laser, Glorystar Laser ubuchwepheshe Co., Ltd has a ephelele R & D uhlelo, nge eziningi amanyuvesi ezidumile ezifuywayo kanye nezikhungo zocwaningo ukuba silondoloze eduze namanye optical futhi lobuchwepheshe, futhi kuyinto Nanyang Institute of isayensi nobuchwepheshe Graduate Sinikezwe isizinda.
Imikhiqizo ezenziwe EU CE isitifiketi kanye nezitifiketi SGS, futhi zonke izici engenayo, inqubo, umshini, lokuthumela nezinye ukuhambisana ISO imihlahlandlela yekhwalithi nokuphathwa kwemvelo Ukuphathwa uhlelo ukuqinisekisa ukuthi izinga kazwelonke. Ukuthwala Global umbono emehlweni, GLORYSTAR oqhubeka ngokugxila isayensi laser nobuchwepheshe ukwabelana nawe esikhathini esizayo ngempumelelo!